Media sosialy sy paikadin'ny fifandraisana amin'ny orinasa | Martech Zone
Alahady, Jolay 31, 2011 Alarobia, Oktobra 26, 2011 Douglas Karr
Socialcast dia namokatra an'ity infographic fampidirana ity tao amin'ny media sosialy ho an'ny orinasa. Ny infographic dia manome topy maso ny antony ampiasain'ny orinasa media sosialy, ny fitaovana ampiasain'izy ireo ary ny fiantraikan'izy ireo. Indraindray isika miditra lalina amin'ny tsimparifary media sosialy sy ny fiantraikan'izany amin'ny paikady fikarohana sy fidirana anaty, saingy zava-dehibe ny mifantoka hatrany amin'ny fahombiazana omen'ny mpanelanelana amin'ny fifandraisana tsotra amin'ny mpanjifanao sy ny vinavinanao.
Ny haino aman-jery sosialy dia mihoatra ny marketing sy ny marika - nanjary ampahany lehibe amin'ny fanentanana ny mpanjifa ny marika. Ho fanampin'ny fampiasana sehatra ara-tsosialy hanaraha-maso ny resaka momba ny indostria, mpifaninana ary vokatra vokariny dia manantona ny mpanjifany amin'ny alalàn'ny tranonkala sosialy ny orinasa mba hampita hafatra momba izay hatolony. Raha ny tena izy, ny media sosialy dia manova ny fomba fifandraisan'ny fikambanana - ny fitaovana sosialy marobe izay misy ankehitriny dia lafo tokoa raha oharina amin'ny fomba nentim-paharazana toy ny mailaka sy ny dokambarotra an-tserasera.
Ankasitrahako ihany koa fa ny infographic dia misy ny fitorahana bilaogy - ny ankamaroan'ny fotoana dia tetikady afovoany ho an'ny fandraisana andraikitra amin'ny media sosialy.
Mifoka ny maso misafidy
15 Nov 2011 amin'ny 11:48 maraina
Infographic mahafinaritra. Miombon-kevitra amin'ireo hevitra ireo aho - ny haino aman-jery sosialy dia mety ho fitaovana mahafinaritra ho an'ny orinasa, saingy mieritreritra aho fa ny hevi-dehibe tokony hotadidina rehefa mampiasa azy dia ny mahatonga azy ho tsara dia rehefa afaka mifampiresaka tokoa ny mpanjifa. Raha misy olona any am-pita iresahana, izay mandray am-po ny fanontaniany dia tena mahery tokoa izany. Ny tena ilana azy dia ny serivisy ho an'ny mpanjifa antitra tsara.